ArticleJun 19, 2020
प्रश्नः सद्‌गुरु, योगका यति धेरै प्रकारहरू छन् । म यो कसरी जानूँ कि कुन योग मेरो लागि सबैभन्दा उत्तम हो ?
सद्‌गुरुः यतिखेर, तपाईं आफ्नो शरीर, आफ्नो मन र आफ्ना भावनाहरूलाई मात्रै अनुभव गर्न सकिरहनु भएको छ । तपाईंलाई केही हदसम्म यिनको बारेमा थाहा छ, अनि तपाईं यो अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि यी कुराहरू जुन तरिकाले काम गरिरहेका छन्, त्यसो हुनको लागि पक्कै पनि ऊर्जाले काम गरिरहेको हुनुपर्छ । ऊर्जा नहुने हो भने, यी सबैथोक हुन सक्दैनन् । तपाईंहरूमध्ये केहीले ऊर्जालाई अनुभव गर्नुभएको पनि हुन सक्छ । अरूहरूले यो सजिलै अड्कल लगाउन सक्छन् कि शरीर, मन र भावनाहरूले काम गर्नका लागि त्यसको पछाडि ऊर्जा हुनैपर्छ । उदाहरणको लागि, माइकबाट बोलदा आवाज ठूलो हुन्छ । यदि तपाईंलाई माइकको बारेमा केही थाहा छैन भनेपनि, तपाईं यो अड्कल गर्न सक्नुहुन्छ कि यसलाई कुनै चीजले चलाइरहेको छ ।
तपाईंको जीवनमा केवल चारवटा वास्तविक पक्षहरू छन्— शरीर, मन, भावना र ऊर्जा । तपाईं आफूभित्र जे–जति गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो यिनै चारवटा तहहरूमा गर्न सकिन्छ ।
केवल यिनै चार तरिकाहरू छन्ः कर्म, ज्ञान, भक्ति वा क्रिया— अर्थात् शरीर, मन, भावना वा ऊर्जाको प्रयोग गरेर नै कहीँकतै पुग्न सकिन्छ । "हैन, हैन म त आस्थाको मार्गमा छु । मैले अरू केही पनि गर्नुपर्दैन ।" त्यस्तो कुनै कुरा हुँदैन । किनकि, कोही पनि केवल दिमाग, केवल हृदय, केवल हातहरू वा केवल ऊर्जाहरू हुँदैनन् । यी मध्ये कुन चाहिँ रोजूँ भन्ने कुनै विकल्प हुँदैन, किनभने तपाईं यी सबैथोकको मिश्रित रूप हो । तपाईं यी चारवटै पक्षलाई सही अनुपातमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । कुरा यत्ति हो कि एउटा व्यक्तिमा दिमाग प्रबल हुन सक्छ, अर्को व्यक्तिमा उसको हृदय प्रबल हुन सक्छ, जबकि अर्कोमा हातहरू प्रबल हुन सक्छन् । यसलाई सही अनुपातमा मिश्रण गरियो भनेमात्र, यसले तपाईंको लागि उत्तम ढङ्गले काम गर्दछ । एउटा व्यक्तिको लागि जुन मिश्रणले काम गर्दछ, त्यसले तपाईंको लागि राम्रोसँग काम नगर्न सक्छ । यसैकारण, आध्यात्मिक मार्गमा जीवित गुरु हुनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि गुरुले तपाईंको लागि सही अनुपातमा मिश्रण बनाउँछन्— अन्यथा त्यसले सही ढङ्गले काम गर्दैन ।
अधिकांश मानिसहरूको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, यी आयामहरू छुट्टाछुट्टै दिशामा गइरहेका हुन्छन् । तपाईंको मन एउटा तरिकाले सोच्ने र महसुस गर्ने गरिरहेको छ, तपाईंको भौतिक शरीर अर्कोतिर हिँडिरहेको छ, तपाईंको ऊर्जा अर्कै बाटोतर्फ लागिरहेको छ ।
तर, भक्त योगी सोच्दछ कि— ज्ञान, कर्म र क्रिया— यी सबै मार्गहरू समयको नाश मात्र हो । ऊ ती सबैप्रति दया गर्दछ, जो यति सरल कुरा बुझ्न सक्दैनन्: जब भगवान नै यहाँ छन् भने, हामीले गर्नुपर्ने भनेको उनको हात समातेर पूरै भरोसा गरी अघि बढ्ने हो । उसलाई दिमाग घुमाउने दर्शनहरू, र हड्डी बङ्ग्याउने योग फजुल लाग्दछ । भक्तको लागि भगवान यहीँ छन्, किनकि भगवान सर्वत्र छन् ।
“योग” को शाब्दिक अर्थ “मिलन” हो । तपाईं जब चैतन्यमा सबैथोकलाई एउटा ऊर्जाको रूपमा अनुभव गर्नुहुन्छ, तब तपाईं योगमा रहनुहुन्छ ।
“योग” को शाब्दिक अर्थ “मिलन” हो । तपाईं जब चैतन्यमा सबैथोकलाई एउटा ऊर्जाको रूपमा अनुभव गर्नुहुन्छ, तब तपाईं योगमा रहनुहुन्छ । आफूभित्र त्यो एकत्वलाई प्राप्त गर्नको लागि अनेक तरिकाहरू छन् । उदाहरणको लागि हठ–योग । हठ–योग मा तपाईं आफ्नो शरीरबाट शुरु गर्नुहुन्छ । शरीरको आफ्नै प्रवृत्ति हुन्छ, आफ्नै दम्भ हुन्छ, आफ्नै प्रकृति हुन्छ । तपाईंको मनबाहेक शरीरको पनि आफ्नै दम्भ हुन्छ ! मानौँ कि तपाईंले यो सोच बनाउनुभयो, “भोलिदेखि म बिहानै ५ बजे उठेर हिँड्न जान्छु” । तपाईं अलार्म लगाएर सुत्न जानुहुन्छ । भोलि बिहान अलार्म बज्छ । तपाईं उठ्न चाहनुहुन्छ, तर तपाईंको शरीरले “ह्याँ, चुप लागेर सुत्” भन्छ । यसको आफ्नै स्वभाव हुन्छ ।
योगको समग्र प्रक्रिया भनेको यही होः तपाईं जेजति जान्नुहुन्छ, त्यसबाट एउटा पाइला चालेर एकदमै अन्जान आयाममा जानु हो । योगको विज्ञान लगभग भौतिक विज्ञान जस्तै छ ।
त्यसैले, हामी शरीरबाट शुरु गर्छाैँ । हठ–योग भनेको शरीरसँग काम गर्ने, शरीरलाई अनुशासित गर्ने, शुद्ध गर्ने अनि उच्च स्तरका ऊर्जाहरू ग्रहण गर्नको निम्ति शरीरलाई तयारी गर्ने माध्यम हो । हामी सबै मानव हौँ अनि यतिखेर हामी सबै जीवित छौँ, तैपनि हामी सबैले जीवनलाई त्यही गहिराइमा र त्यही प्रखर रूपमा अनुभव गरिरहेका हुँदैनौँ, किनकि हाम्रा प्राण ऊर्जाहरू उस्तै हुँदैनन् । भिन्न‐भिन्न मानिसहरूले जीवनलाई भिन्दाभिन्दै स्तरको तीव्रतामा अनुभव गर्छन् ।
शुरुमा तपाईं आफ्नो शरीरसँग काम गर्नुहुन्छ, अनि श्वासमा काम गर्नुहुन्छ, अनि मनमा, त्यसपछि आफ्नो भित्री आयाममा काम गर्नुहुन्छ । सबै पक्षहरूलाई अत्यन्तै सन्तुलित तरिकाले एकैपटक एउटा एकाइको रूपमा सम्बोधन गरिनु अपरिहार्य छ ।
योगको समग्र प्रक्रिया भनेको यही हो: तपाईं जे–जति जान्नुहुन्छ, त्यसबाट एउटा पाइला चालेर एकदमै अन्जान आयाममा जानु हो । योगको विज्ञान लगभग भौतिक विज्ञान जस्तै छ । जस्तै कि: यदि तपाईंले दुई भाग हाईड्रोजन र एक भाग अक्सिजन मिसाउनुभयो भने, त्यसबाट पानी बन्दछ । यदि महान् वैज्ञानिकले मिसाउने हो भनेपनि, त्यसबाट पानी निस्कन्छ, अनि यदि एक मुर्खले मिसाए भनेपनि, त्यसबाट पानी नै निस्कन्छ । त्यसैगरी, योगमा समेत यही लागू हुन्छ— चाहे कुनै महान् योगीले गरून् वा कुनै अज्ञानी व्यक्तिले, यसले केही फरक पार्दैन । यदि उचित तरिकाले अभ्यास र साधना गर्ने हो भने, यसको प्रतिफल स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।